Torana tsy nahatsiaro tena: nianjera avy eny amin’ny rihana fahatelo ilay mpiasa | NewsMada
Tsy fitandremana nitera-doza. Izay no azo ilazana ny nanjo ity lehilahy iray mpiasa nanao fandravahana ny hotely lehibe iray, etsy Analakely. Avy eny amin’ny rihana fahatelo izy no nianjera. Nitontona mafy teo amin’ny arabe, nivoa-dra ny sofiny… Tsy nahatsiaro tena taorian’izay hatreny amin’ny hopitaly.
Tsy nahatsiaro tena intsony ilay lehilahy iray, sahabo ho 34 taona nianjera avy eny amin’ny rihana fahatelon’ny hotely lehibe iray etsy Analakely, omaly, tokony ho tamin’ny 9 ora sy sasany maraina. Araka ny fantatra, nisolifatra avy eny talantalam-by (échafaudage) nitsanganany ny tenany teo am-pametahana ireo haingo “aluminium” tamin’ny hotely ka nianjera avy hatrany. “Ratsy fatotra ny fehikibo aroloza tamin’io fotoana io ka nianjera avy hatrany izy raha vao niakatra teo ambony “échafaudage” ary notatazan’ny taribin’ny Jirama vao nianjera teo amin’ny arabe”, hoy i Nantenaina, isan’ireo mpiasa niasa teny amin’ny hotely, omaly. Vokany, tapaka ny tongotra havian’ilay niharam-boina, vaky ihany koa ny lohany noho ny fianjerany ary nahitana fivontosana teo amin’ny masony. Fantatra nandritra ny fanadihadiana fa ny lohany no nitotona tamin’ny tany voalohany ary nanaraka ireo “échafaudage” izay nitaingenany . Nampihoraka ny mponina teny amin’ny manodidina, indrindra fa ireo mpiasa niaraka tamin’io lehilahy io ny tranga, omaly. Nanaitra ny rahalahiny, niara-niasa taminy ihany koa ny fahitany ny iray tampo taminy nitsirara tamin’ny arabe, izay sady nandeha ra orona sy sofina no tsy nahatsiaro tena intsony niampy ireo voina hafa nahazo azy.
Taorian’ny loza, nentin’ireo mpamonjy voina etsy Tsaralalana teny amin’ny hopitalin’Ampefiloha ny lehilahy ka niditra tao amin’ny “urgence. Fantatra ankehitriny fa eny amin’ny “soin intensif” ilay mpiasan’ny orinasa Mada pose io. “Tsy taizan’aretina ny lehilahy ary isan’andro izy, manao fehikibo aroloza foana izay fatorany amin’ilay vy iasany, fa androany izany no tsy nataony”, hoy ny fanazavan’ireo mpiara-miasa aminy. Nalefa nody avy hatrany ihany koa ireo niasa teny an-toerana rehetra taorian’ny voina raha mbola nanohy izany kosa ireo izay niasa tany amin’ny rihana ambany.